बेला बखत चर्चामा रहिरहने नेपाली कलाकारिता क्षेत्रमा पछिल्लो समय दुई कलाकार दुर्गेश थापा र गरिमा शर्मा बिचको टिकटक लाईभ कुराकानी बिबादित बिषय बनेर आएको छ । दुर्गेश बिभिन्न समय गीत संगीतका कारण बिबादमा तानिएका भएपनि यस पटक भने चरित्रमा नै प्रश्न चिन्ह लाग्ने गरि विवादमा मुछिएका छन् । दुर्गेशको टिकटक लाईभमा गरिमाको प्रवेश भए संगै आक्रोशित दुर्गेश र टिकटक मार्फत नै हिट भनिएकी गरिमाले हामी लाईभमा छौं भन्ने हेक्का नगर्दा उनिहरु बिचको मात्र होईन बाहिरी सम्बन्ध समेत छरपष्ट भएको छ ।
राम्रो पढाई भएकी छोरी परिवारको सल्लाह बिपरित कलाकार बन्छु भन्दै हिडेपछि उनका परिवारका सदस्य तनावमा त दिए यद्यपी छोरीको हटका कारण थम्थमाउँदै गरेको मनमा उनको टिकटक काण्डले अर्को तनाव पक्कै थपिएको छ ।
गरिमाको यो बेला रुप छ, आकर्षक देखिने उमेर छ । तर यहि रुप र उमेर संधै रहन्न । तर कलाकारिता भनेको अमर चिज हो, जो समाप्त हुँदैन मरेर जाँदापनि । यो कुरा गरिमाले बुझेकी भए कलाकारिता क्षेत्रमा लागेको छोटै समयमा चरित्र नै असरल्ल हुने गरि विवादमा आउने थिईनन् उनि ।
आफुलाई यो सफलता दिएको टिकटक र आफुलाई हेर्दै आएका दर्शकको समेत ईज्जत नगरी गरिमा जुन ढंगले प्रस्तुत भईन् गरिमा वकाईदा दुर्गेश थापाको टिकटकमा आएर खुलेआम आफ्नो चरित्र उछेलेर गईन् । अव तिमी कुन कुन कुरामा आफु राम्रो भनेर सफाई दिन्छेउ गरिमा ? जव की तिमी बिवाहित पुरुष संगको सम्बन्धमा थियौं र अर्की महिलालाई बढो हेपाईको संकेतमा कस्ती छन् त तिम्री मायालु भन्दै थियौ । दुर्गेशले लाईभमा नै तँ ७ जना संग सुतेकी होस् भनेर तिमीलाई किन प्रश्न गरे ?
गरिमा सुतेका उठेका जानकारी र सम्बन्ध दुर्गेश सम्म कसरी पुग्यो र मजाक थियो भने यो मजाक उनका ा बुवा आमा आफन्त समाज, दर्शक र नेपाली समाजलाई पच्ने मजाक हो यो ? गरिमा जी , मजाकमा चुटकिला भन्ने हो सुतेको उठेको कुरा गर्ने होइन ।
गरिमालाई बढो घमण्ड छ मेरा फ्यान छन् भन्ने तर के उनका फ्यानले देख्न चाहेको गरिमा शर्मा यहि हो ? ‘लंकाको सुन सम्झेर कान छामेको’ जस्तो होईन कलाकारिता क्षेत्र । गरिमालाई लागेको होला म जति सुपरहिट कोही छैन तर हाम्रै सामु छ उनिभन्दा कयौं सुपरहिट महिला कलाकारको दुखद अन्त्य भएका घटना ।
ज्यादा कल्पना र महत्वकाक्षां राखेर हिड्दा भोलीका दिनमा पिडा आफैंलाइ नै हुनेछ यो सत्यलाई स्वीकार्न सिक्नु पर्छ गरिमाले, नत्र फेरी दोहोरिने छ उनको अहिलेको भन्दा उदेक लाग्दो चर्चा ।
टिकटक, यूटुव र फेसबुकलाई आधार मानेर कलाकारिताको मापन गर्ने हो भने सबै भन्दा ठुला कलाकार मुकुन्दे हुन् । कति भयो गरिमा चर्चामा आएको र उनि यूटुवकर्मीलाई यूटुपे भन्दै अहम् देखाउँदै हिडेकी छन् । यूटुव कहाँ छ र मेरो ईन्टरभ्यू लिईदेला भनेर हिड्ने गरिमालाई अहिले रजतपटले वास्तविकता देखाउँदा चरित्र हत्या गर्यो भन्न लाज लाग्न पर्ने हो ।
गरिमालाई याद होला एक बर्ष पहिले प्रकाश सुवेदीकै रजतपटमा ईन्टरभ्यू दिन हाम फालेर गएको समय, कुनै भयंकर कलाकार भनेर होईन टिकटकको प्रतिनिधित्व स्वरुप बोलाईएको थियो उनलाई । हिजो उनको पक्षमा समाचार आउँदा दंगदास हुनेले आज आफ्नो कमजोरी देखाईदिदा पनि उत्तीकै गम्भिरताका साथ लिन सक्नु पर्छ यदि आफुलाई सेलिब्रेटी ठानिन्छ भने ।
याद छ होला नि एउटा हिन्दि उखान छ – ‘चिटिया तादत मे जित्ने भी हो , गन्न घसिटके नही ले जा सकते’ तेही भएर ओजन सहितको कलाकार बनेर आकाश मा चम्किने तारा बन नकि फिस्स हासेर बर्षातमा चम्किने जुनकिरि ।
उनको कथा पनि बढो आश्चर्य लाग्दो छ १० महिना पहिले एउटा म्यूजिक भिडियोमा काम गरेको पैसा नपाएर मिडिया नै गुहार्नु पर्ने अवस्थाकी उनि एक बर्ष नपुग्दै समाजसेवीका रुपमा अरुलाई सयौंलाई खाना खुवाउँदै र संस्थालाई समेत आर्थिक सहयोग गर्दै हिड्दैछिन् । यसलाई के भन्ने नेपाली कलाकारले एक बर्षमै आर्थिक रुपमा ठुलै फड्को मार्छ भनौं भने जीवन नै यहि क्षेत्रमा अपर्ण गरेकाहरु समेत भन्छन् कलाकारितामा पैसा छैन ।
गरिमा यति सम्म गैर जिम्मेबार हुन् की उनले समाजसेवा गर्न जाँदा नक्कली प्रेश कार्ड भिरेर हिडिन्, फोटो खिच्दा खोल्न बिर्षिएको सो कार्ड उनले महिनौं पहिले छोडिसकेको चितवनको ‘रेडियो अपर्ण’को रहेको बताईन् । उनले आफुलाई पूर्व रेडियोकर्मी त बताईन् तर संचार आचारसंहितामा छोडिसकेको मिडियाको प्रेश कार्ड प्रयोग गरेर आफ्नो फाईदा लिन पाईन्छ ? उनले दुरुपयोग गरिन भन्दैमा हुन्छ जवकी उनको घाँटीमा झुण्डीएको प्रेश कार्डका आधारमा उनिमाथी आम जनताको विश्वास जोडिएको हुन्छ ।
उसैपनि कोरोनाले तहस नहस भएको नेपाली मनोरंजन उद्योग, फिल्म हलहरु पार्टी हलका रुपमा परिणत भै रहेको अवस्थामा कलाकारहरुको यस प्रकारको हर्कतले यस क्षेत्र प्रति अविभावक र नयाँ आउने कलाकारमा नकारात्मक छाप पर्न सक्छ । गरिमालाई शुभकामना उनको उचाई अझै चुलिदै जावस् तर जुन थालमा खायो त्यसैमा थुक्ने शैली भने उनले बेलैमा सुधार्नु पर्छ होईन भने अन्त्य दुखद हुने छ गरिमाको कलाकारिताको, घमण्डको र दर्शक र मिडियाप्रतिको गैर जिम्मेबार हर्कतको ।
टिकटकमा गरिमाले भनेकी छन् हाम्रा दर्शक सोझा छन् । सरी गरीमा हाम्रा दर्शक सोझा होईनन् स्मार्ट छन् ,कला र कलाकारितालाइ प्रस्ट बुझ्न र मुल्यांकन गर्न सक्ने हैसियत राख्छन। गरिमाको कुराले त उनि दर्शक सोझा छन् मैले जे गरेनी जे भनेनी पत्याउँछन् भन्ने देखियो । त्यसको मतलव के हो ? कि त उनि बाठो भएर दर्शक झुक्याउँदै आएकी कि त उनि आफैंलाई यो उचाईमा पुर्याउने दर्शकलाई पनि मान्छे गन्दिनन् । खाषमा भन्ने नै हो भने यो शैलीको घमण्ड असली कलाकारमा हुँदै हुँदैन ।
चेतना भया गरिमा ! सामाजिक संजालको आडमा कलाकार भएकी तिमी यस क्षेत्र, आफ्ना परिवार, साथीभाई, दर्शक, आफन्त सबैकी चेली पनि हौं जसले तिमीबाट यस्ता लज्जास्पद अभिव्यक्ती र हर्कतको अपेक्षा गरेका पक्कै हुँदैनन् ।